Ithegi: intengiso yokuthengisa | Martech Zone
Ithegi: ukuthengiselana kwabathengisi
NgoMvulo, Matshi 21, 2022 NgoMvulo, Matshi 21, 2022 Douglas Karr
Omnye wabaxumi bethu ukwishishini lezempilo kwaye usicele ukuba siphicothe ukusetyenziswa kwabo kweSalesforce kunye nokubonelela ngoqeqesho kunye nolawulo ukuze bakwazi ukwandisa imbuyekezo yabo kutyalo-mali. Olunye uncedo lokusebenzisa iqonga elinje ngeSalesforce yinkxaso yalo engakholelekiyo yokudityaniswa komntu wesithathu kunye nokudityaniswa kwemveliso ngendawo yentengiso yeapp, iAppExchange. Olunye lolona tshintsho lubalulekileyo lokuziphatha olwenzekile kuhambo lomthengi kwi-Intanethi kukukwazi
Ukuhlala ngaphambi kotshintsho olukhawulezileyo kunye nokwenza izinto kwiqonga lamashishini amakhulu, anje ngeSalesforce, kunokuba ngumceli mngeni. Kodwa i-Salesforce kunye ne-AccelQ basebenza kunye ukuhlangabezana nalo mngeni. Sebenzisa iqonga lolawulo lomgangatho we-agile we-AccelQ, odityaniswe ngokuqinileyo ne-Salesforce, ikhawulezisa kakhulu kwaye iphucula umgangatho wokukhutshwa kweSalesforce yombutho. I-AccelQ yinkampani yeqonga lokusebenzisana elinokusebenzisa ukuzenzekelayo, ukulawula, ukwenza, kunye nokulandela umkhondo wovavanyo lweSalesforce. I-AccelQ kuphela kovavanyo oluqhubekayo